‘Munhu Ane Rupo Achakomborerwa’—Zvirevo 22:9
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Douala Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
ZVIBAYIRO zvakabvira kare zvichikosheswa pakunamata kwechokwadi. VaIsraeri vaipa zvibayiro zvemhuka, uye vaKristu vagara vachizivikanwa nekupa “chibayiro chokurumbidza.” Asi pane zvimwe zvibayiro zvinofadza Mwari zvikuru. (VaH. 13:15, 16) Zvibayiro izvi zvinounza mufaro nemakomborero sezvinoratidzwa nemienzaniso inotevera.
Hana, mushumiri waJehovha ainge akatendeka, aida chaizvo kuva nemwanakomana asi aisakwanisa kubereka vana. Akanyengetera achipika kuna Jehovha kuti kana akabereka mwanakomana, ‘aizomupa Jehovha mazuva ese eupenyu hwake.’ (1 Sam. 1:10, 11) Hana akazova nepamuviri ndokubereka mwanakomana ainzi Samueri. Samueri paakarumurwa, Hana akamuendesa kutebhenekeri sezvaakanga apika. Jehovha akakomborera kuzvipira kwaHana. Hana akava nevamwe vana 5, uye Samueri akava muprofita uye munyori weBhaibheri.​—1 Sam. 2:21.
Kufanana naHana naSamueri, mazuva ano vaKristu vane ropafadzo yekushandisa upenyu hwavo pakushumira Musiki wavo. Jesu akavimbisa kuti chero kuzvipira kwatinoita kuti tinamate Jehovha kuchakomborerwa.​—Mako 10:28-30.
Panguva yevaKristu vekutanga, mumwe mukadzi wechiKristu ainzi Dhokasi aizivikanwa chaizvo ‘nemabasa akanaka ekupa zvipo zvekunzwira ngoni.’ Asi akarwara ndokufa, uye izvi zvakaita kuti ungano yacho isuruvare zvikuru. Vadzidzi pavakanzwa kuti Petro aiva munharaunda yacho, vakamukumbira kuti akurumidze kuuya. Fungidzira kufara kwavakaita Petro paakauya akamutsa Dhokasi. Urwu ndirwo rumuko rwekutanga runozivikanwa rwakaitwa nemuapostora. (Mab. 9:36-41) Mwari akanga asina kukanganwa kuzvipira kwaDhokasi. (VaH. 6:10) Mabasa ake erupo akanyorwa muShoko raMwari semuenzaniso wekuti titevedzere.
Muapostora Pauro akaratidzawo muenzaniso wakanaka zvikuru pakushandisa nguva yake uye pakuratidza kuti aiva nehanya nevamwe. Paainyorera hama dzake dzaiva muKorinde, Pauro akati: “Ini ndichafara kwazvo kushandisa zvinhu zvose uye kushandiswa zvizere nokuda [kwenyu].” (2 VaK. 12:15) Pauro akadzidza pane zvakaitika kwaari kuti kana munhu akazvipira achiitira vamwe zvakanaka anogutsikana zvikuru uye chinonyanya kukosha ndechekuti anokomborerwa uye anofarirwa naJehovha.​—Mab. 20:24, 35.
Zviri pachena kuti Jehovha anofadzwa nazvo patinoshandisa nguva yedu uye simba redu pakutsigira Umambo uye kubatsira vatinonamata navo. Asi pane dzimwe nzira here dzekutsigira nadzo basa rekuparidza Umambo? Hongu! Kuwedzera pamabasa anoratidza rudo, tinogona kukudza Mwari nekupa zvipo. Zvipo izvi zvinoshandiswa pakutsigira basa rekuparidza rinoitwa pasi rese, iro rinosanganisira kutsigira mamishinari uye vamwe vashumiri chaivo venguva yakazara. Uyewo kugadzirwa nekushandurwa kwemabhuku nemavhidhiyo, kubatsira panoitika njodzi, uye kuvakwa kweDzimba dzeUmambo, zvese zvinotsigirwa nezvipo zvatinopa. Tinogona kuva nechokwadi chekuti ‘munhu anopa achakomborerwa.’ Uyewo patinopa zvinhu zvedu zvinokosha kuna Jehovha, tinenge tichimukudza.​—Zvir. 3:9; 22:9.
Zvinoitwa Nevamwe Pakutsigira Basa Remunyika Yese
Sezvaiitwa mumazuva emuapostora Pauro, vakawanda mazuva ano ‘vanotsaura chimwe chinhu’ kana kuti mari yavanozoisa mumabhokisi ezvipo akanzi “Basa Remunyika Yese.” (1 VaK. 16:2) Mwedzi wega wega, ungano dzinotumira mari iyi kuhofisi yeZvapupu zvaJehovha inoona nezvebasa remunyika yadzinenge dziri. Unogonawo kutumira chipo chako kusangano repamutemo rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha munyika yaunogara. Kana uchida zita resangano repamutemo rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha munyika mako, tapota nyorera kana kuti fonera hofisi yebazi remunyika yako. Kero yehofisi yebazi inowanika pawww.jw.org. Zvichienderana nemamiriro ezvinhu emunyika mako, zvipo zvaunogona kutumira wega ndeizvi:
Kupa mari uchiibvisa muakaundi yako yekubhengi uchiiendesa muakaundi yebazi renyu, kana kuti kushandisa kadhi rekubhengi. Mune dzimwe nyika, munhu anogona kupa mari achishandisa jw.org kana kuti imwewo website yakasarudzwa.
Kupa mari, zvishongo, kana kuti zvimwe zvinhu zvinokosha. Tumira pamwe chete netsamba inotaura kuti hautarisiri kuzozvidzorerwa.
CHIRONGWA CHEKUPA UCHIZODZORERWA
HUMWE URONGWA HWEKUPA
Pane dzimwewo nzira dzekupa nadzo zvipo zvekutsigira basa reUmambo remunyika yese. Nzira dzacho dziri pasi apa. Pasinei nekuti uri kuda kupa nenzira ipi, tapota tanga wataura nehofisi yebazi remunyika yako kuti rikuudze kuti panzira dziri pasi apa ndedzipi dzinoshanda munyika yako. Sezvo mitemo ichisiyana munyika nenyika, zvinokosha kuti utange wabvunza vanhu vane ruzivo rwezvemitemo nemitero usati wasarudza kuti wopa chipo uchishandisa nzira ipi.
Inishuwarenzi Uye Mari Yemudyandigere: Munhu angaita kuti sangano rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha rizopiwa mari yake yeinishuwarenzi yeupenyu kana kuti yemudyandigere.
Maakaundi Ekubhengi: Munhu angaita kuti mari iri mumaakaundi ake ekubhengi izopiwa sangano rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha kana afa, zvichienderana nezvinodiwa nemabhengi munyika yacho.
Masheya (Stocks) Uye Magwaro Anoratidza Mari Yakakwereteswa (Bonds): Munhu anogona kusarudza kupa sangano rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha masheya ake emubhizinesi kana magwaro anoratidza mari yaakakweretesa, kana kuti anogona kuronga kuti zvizopiwa sangano racho kana afa.
Zvipo zvakadai zvinoda kuti ari kupa wacho anyatsoronga. Pane kabhuku kari mumutauro weChirungu nechiSpanish kanonzi Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide kakaitirwa kuti kabatsire vanhu vanoda kutsigira basa reZvapupu zvaJehovha remunyika yese. Kabhuku kacho kanotsanangura nzira dzakasiyana-siyana dzekupa zvipo iye zvino kana kuti munhu wacho paanenge afa. Mashoko ari mukabhuku aka angasanyatsoshanda kwauri pamusana pemitemo yemitero kana kuti mimwewo mitemo yemunyika yauri kugara. Vachishandisa nzira idzi dzekupa, vakawanda vakatsigira basa rechitendero chedu uye rekubatsira vanhu pasi rese, uye zvakaita kuti vakwanise kuderedzerwa mitero yavanobhadhara. Kana kabhuku aka kachiwanika munyika yako, unogona kukakumbira kumunyori weungano yako.
Kana uchida mamwe mashoko nyorera kana kuti fonera hofisi yebazi.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA November 2017
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA November 2017